Dagaalka Buuraha Galgala: Macdan, Mucaarid, Al-Shabaab iyo Puntland [Maqal iyo Muuqaal] Q.1aad • Horseed Media
You are here: Home / Featured / Dagaalka Buuraha Galgala: Macdan, Mucaarid, Al-Shabaab iyo Puntland [Maqal iyo Muuqaal] Q.1aad
Dagaalka Buuraha Galgala: Macdan, Mucaarid, Al-Shabaab iyo Puntland [Maqal iyo Muuqaal] Q.1aad
Deegaanka Galgala oo kamid ah buuraleyda silsilada ah ee Golis, ayaa hoostagta degmada Bosaaso ee gobalka Bari. Galgala ayaa ayadu ku taal buuraha dhanka Galbeedka ka xiga tuulada Karin ee saaran Laamiga dhanka koonfureed uga beegan magaalada Bosaaso ee caasimada Ganacsiga Puntland.
Warbixintan waxay Horseed Media akhristayaasheeda ugu soo bandhigeysaa habkii uu ku bilowday dagaalkii Galgala, marxaladii lasoo maray iyo xukuumadihii Puntland habkii ay u abaareen iyo sababaha keenay in buuraha ka ag dhaw Galgala ay noqoto xarunta Al Shabaab ay deegaanada Puntland ku leeyihiin.
Qeybta 1aad: waxaan uga hadleynaa bilowgii xurguftii Galgala iyo Habkii ay u abaareen dowladihii ay kala hogaaminayeen Gen.Cadde Musse iyo mida hada Puntland joogta ee Cabdiraxmaan Maxamed Faroole.
Qeybta 2aad: waxaan uga hadleynaa xaalada hada Galgala ka jirta iyo sidii Al Shabaab ay ulla wareegtay deegaanka Galgala, kadib markii halkaasi laga saaray dagaalkii ka dhacay dhulkaasi 2010kii oo ay halkaasi ciidamada Dowlada la wareegeen. Waxaana qeybtaas danbe uga hadleynaa sababta hada keentay in Galgala ay noqoto fariisinka Xarakada Al Shabaab ee waqooyiga Soomaaliya.
Bilowgii Dagaalka: Attam iyo Galgala
2005: Sanadkaasi ayaa waxaa deegaankaasi markii ugu horeysay u wareegay Maxamed Siciid Attam oo ahaa ninkii aasaasay maleeshiyaad deegaanka kasoo jeeda.
Maxamed Siciid Attam ayaa isagu kamid ahaa ardaydii wax ka baran jirtay Jaamacada Barriga Afrika, isla markaana ka mid ahaa dadka diinta barta balse aaminsan fikirka jihaadiga ah, isagoo ka qeyb qaatay dagaaladii kooxaha islaamiyiinta ah ee koonfurta Soomaaliya la galeen dagaal-oogayaashii Muqdisho heysan jiray xiligii Maxaakiimta Islaamiga. Maxamed ayey isku dhaceen marar badan dhanka fikirka Culumaa’udiinka ku sugan magaalada Bosaaso iyo masjidka Rowda halkaasi oo uu kamid ahaa dadka ku cibaadeysta, Maxamed oo markii danbe dhaliil kala kulmay culumaa’udiinka fikirkiisa ku wajahan dagaalka hubeysan ayaa xiligaasi u wareegay buuraha Galgala oo uu isagu deegaan ahaan kasoo jeedo.
Maxamed Siciid Attam oo isagu si weyn u mucaaradsanaa hanaanka dhismaha dowlada Puntland, isla markaana weligiis aaminsanaa in dowlad islaami ah maamusho Puntland ayaa dagaalkii ugu horeyey ee uu la galo Dowlada Puntland bilaabay sanadkii 2006.
Bartamihii sanadkii 2006, ayuu Maxamed Siciid Attam helay fursadii ugu wanaagsaneyd oo uu ciidan xoogleh ku uruursado, xiligaasi oo dadka deegaanka si weyn uga soo horjeedeen qorshihii xukuumadii Cadde Musse ay ku dooneysay inay macdan uga baarto deegaanka Majiyahan.
Dagaalkii Macdanta iyo Maxaakiimta
2006: Xukuumadii Cadde Muuse ayaa xiligaasi bilowday baaritaankii Batroolka iyo Macdanta Puntland, iyadoo xiligaasi khabiiriin ka socota Range Resource ay tageen deegaanka [Majiyahan] oo aan ka fogeyn Galagala, halkaasi oo la rumeysan yahay inay ku jirto Macdanta TIN – TANTALUM. Qorshaha shirkada Range ayaa ahayd inay deegaanka Majiyahan ku sameyso baaritaan ama sahmin macdanta ku jirta. Waxaan horey deegaankaasi baaritaan ugu sameeyey shirkadii Technoexport oo laga lahaa dalka Bulgaria sanadihii 1970kii xiligaasi oo ay joogtay xukuumadii AUN Maxamed Siyaad Bare.
Gen.Cadde Muuse iyo wasiirkii Batroolka Xassan Aloore oo heshiiska wada galay
Xiligaasi ayuu Maxamed Siciid Attam taageero xoogan ka helay beelaha ku dhaqan buuraleyda Galgala, iyadoo wakhtigaasi dadka deegaanka ay wax badan ka tirsanayeen dowladii Puntland oo iyadu heshiiska kula gashay shirkada Range dhanka Sahminta khayraadka Puntland ku jira ee Macdanta iyo Batroolka. Sahmintan oo horudhac u ahaa qorshihii xukuumada Cadde Muuse ee dhanka soo saarka khayraadka Puntland. Shirkadaasi Range oo ah midii marka danbe dalka keentay shirkada Afrikan Oil oo hada baaritaanka shidaalka ka waday qeybo kamid ah gobalka Bari.
Xiligaasi ayuu Maxamed Siciid Attam fursad u helay inuu aruursado ciidamo beeleed ku taageersan fikirkiisa ahaa in laga hortago xukuumadii Cadde Musse, balse fikirka qorshahiisa ka danbeeyey ayaa ahaa in la afgambiyo hab dhismeedka Dowlada Puntland, lana dhiso maamul Islaami ah iyadoo lala kaashanayo xoogaga islaamiyiinta ah oo wakhtigaasi isku aruursanayey qeybo kamid ah koonfurta Soomaaliya.
Dhamaadkii 2006: Maxamed Siciid Attam wuxuu kamid ahaa dagaalyahanadii kasoo jeeday Puntland ee ku biiray Maxkamadihii Islaamiga, isagoo weliba taageero xoogleh ka helayey xubnaha ugu mayalka adag ee Maxaakiimta islaamiga, kuwaasi oo aaminsanaa in dagaalkooda ku baahiyaan waddanka oo dhan, isla markaana ay gacanta ku dhigaan deegaanada Puntland iyo Soomaaliland. Maxamed Siciid Attam ayaa lagu xasuustaa inuu Maxkamadaha Islaamiga ee kusugnaa Muqdisho xiligaasi ku yiri “…Puntland lug baan ku galayaa anoo tikniko wadan, lug baana ku xoreenayaa….”
Xiligaasi ayey xukuumadii uu hogaaminayey Gen.Cadde Musse xoogeedii u wareegtay magaalada Gaalkacyo ee gobalka Muddug, halkaasi oo ay kusoo dhawaadeen ciidamadii Maxkamadaha Islaamiga. Wakhtigaasi ayaa la dhisay maamulka Galmudug, waxayna Puntland iyo Galmudug oo iskaashanaya oo ay gacan siinayaan ciidamada Itoobiya ayaa dagaal ku burburiyey awoodii Maxaakiimta ee koonfurta Mudug soo gaaray.
Gen.Cadde Muuse xiligii dagaalkii Maxkmadaha ee Bandiiradley
Kadib burburkii Maxkamada Islaamiga, Maxamed Siciid Attam wuxuu kusoo noqday deegaanada Galgala halkaasi oo uu kasii waday ololihiisii dagaalka ku wajahan deegaanka Majiyahan. Xiligaasi ayaa la rumeysan yahay in sidoo kale uu Maxamed Siciid Attam taageero ka helay xubno kamid ah dowlada Soomaaliland oo kasoo jeeda gobalka Sanaag kuwaasi oo la rumeysan yahay inay siiyaan saanad militari oo isugu jira rasaas, miinooyin iyo hubka hoobiyaha loo yaqaan.
2007: Dowlada Puntland waxay sidoo kale xalin weyday taageeradii dhanka beelaha ku dhaqan Sanaag Bari iyo qeybo badan oo kamid ah Bosaaso u fidinayeen ama ku taageerayeen dhaq dhaqaaqii Galgala ka socday oo uu hormuudka ka ahaa Maxamed Siciid Atam. Xukumadii xiligaasi ayaa ku guuleysan weysay inay shacabka ka dhaadhiciso ninka ay taageerayaan inuu wato qorshe ka baxsan arrimo qabiil ama deegaan. Hase yeeshee wax badan oo laga tabanayey dowlada ayaa keentay in shacabka iyo Dowlada iska kaashan waayaan arrimaha ka jiray deegaanka Galgala. Waxaana sii socday taageerada dhaqaale iyo hub ee Bosaaso sida qarsoodiga ah looga diraya oo lagu garab siinayey maleeshiyaadkii ka dagaalamayey buurta Galgala oo xiligaasi u badnaa hal beel oo kaliya.
Cabdi Jamaal Cismaan, Wasiir-kuxigeenka Amniga ee Puntland
Horaantii Bishii Oktoober ee sanadkii 2007 ayaa kontaroolka koonfureed ee magaalada Bosaaso lagu qabtay 4 dhalinyaro ah oo hub u siday buuraha Galgala, todobaad kadib taariikhdu markay ahayd 18kii Oktoober ee sanadkii 2007, ayaa waxaa dagaal xoogan uu ka dhacay guri ku yaal xaafadda Raf iyo Raaxo ee magaalada Bosaaso. Gurrigan ayey dowladu sheegtay inay ahayd xaruntii kooxda Shiikh Attam u adeegsan jirtay hawlahooda Bosaaso. Gurrigan waxaa iskalahaa Cabdijamaal Cismaan Maxamed oo kamid ahaa horjoogayaasha Kooxda Galgala. Cabdijamaal ayaa hada ah Wasiir kuxigeenka Amniga ee xukuumada hada Puntland ka arrimisa ee uu hogaamiyo Madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Faroole.
Dagaalka ka dhacay guriga Cabdijamaal ee ku yaal xaafada Raf iyo Raaxo ayey dowlada ku weerartay hub culus kadib markii dhalinyarada hubeysan ee guriga ku jiray ay iska caabiyeen ciidamadii doonayey inay soo xiraan, waxayna ciidama adeegsadeen hub culus uu ku jiro qoriga 106 ama Soomaalidu u taqaan JIIB oo markii ugu horeysay ka dhex dhacay gudaha magaalada Bosaaso. Dagaalkan oo saacado badan socday ayaa markii danbe lagu guuleystay inuu joogsado kadib markii ay is dhiibeen raggii hubeysnaa ee ku jiray guriga oo gaarayey 7 nin. Cabdijamaal ayaa asagu xiligaasi ku sugneyn gurigiisa.
Arrintan ayaa xiisado badan keenay iyadoo odayaasha beelaha Warsangeli ay xukuumada ka codsadeen in raggan lasiidaayo, waxaan arrintan sidoo kale soo dhexgalay dowladii Federaalka oo u kala dabqaadeysay xiligaasi Xukuumadii Cadde Musse iyo Beesha Warsangeli oo ay raggan kasoo jeedeen, waxaana lago guuleystay todobaadyo kadib 30kii bishii Oktoober ee 2007, in dowladii Cadde Muuse ay xabsiga kasii deyso dhamaan ragii ay qabatay oo gaarayey 11 nin. Waxayna siideyntooda sharuud uga dhigtay in beesha Warsangeli dowlada kala shaqeyso sidii loo soo afjari lahaa dagaalka Galgala. Arrintan ma dhicin oo dagaalkii goos gooska ahaa ee u dhaxeeyey Xukuumada iyo Kooxda Galgala waa sii socday, maadaama dhalinyarada ku sugnaa Galgala ay taageero ka helayeen beeshooda, dowladana ku guuleysan weyday in ay heshiis rasmi ah la gasho beeshaasi. Wuxuuna dagaalka goos gooska ah sii socday illaa la gaaray xiligii doorashada ee bishii Janaayo 2009.
2008: Habeenimadii 5tii Feberaayo 2008 ayuu weerarkii bambaano ee ugu horeeyey ka dhacay gudaha Puntland, lala beegsaday nawaaxiga dekkada weyn ee magaalada Bosaaso, halkaasi oo ay ku yaaleen makhaayado dadka ka yimaada Itoobiya ee u badan Oromada ku sugnaayeen. Weerarkan oo ahaa kii ugu horeeyey uguna weynaa oo ka dhacay gudaha Puntland ayaa waxaa ku dhinteen 22 qof oo dhamaantood Itoobiyaan ah, 19 kamid ah dadkaasi ayaa ahaa Muslimiinta Oromada oo u yimid Bosaso, si ay halkaasi uga tahriibaan.
Qaraxan ayaa lagu beegay saacado kadib markii uu Madaxweynaha Puntland Gen.Cadde Musse uu magaalada Bosaaso ka dhoofay, asagoo kusii jeeday magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. Goobta uu qaraxa ka dhacay ayaan ka fogeyn wadada muhiimka ah ee isku xirta Dekkada Bosaaso, Aiporka iyo xarunta Madaxtooyada Boosaaso oo uu xiligaasi ka baxay Madaxweynaha.
Salaadii Janaasada ee Aaskii dadkii Oromada ee muslimka ahaa.
Dadkii ku dhintay weerarkan argagaxiso ee u badnaa Itoobiyaanka ayaa lagu aasay Xabaal-wadareed looga sameeyey duleedka Airporka magaalada Bosaaso.
Daawo Video laga duubey Qaraxii Bosaaso
Mucaaridka xukuumadii Puntland ee Cadde Musse oo uu xiligaasi hogaaminayey Madaxweynaha Xiligan Cabdiraxmaan Maxamed Faroole ayaa iyagu dowlada ku eedeeyey inay dhaceyso macdanta ku jirta Majiyahan ayagoo garowsho u muujinayey ciidamadii uu horkacayey Maxamed Siciid Attam oo ay ku tilmaameen dad deegaanka ah oo u dagaalamaya illaalinta macdanta dhulkooda ku jirta.
[Dhageyso: Faroole oo ku eedeenaya Cadde Musse barnaamijka soo saarista Khayraadka]
2009: Bishii Janaayo ee sanadkii 2009 ayaa waxaa deegaanada Puntland ka dhacay doorashada Madaxweynaha. Baarlamaanka Puntland ayaa doortay Madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Faroole oo isagu kamid ahaa mucaaridkii xukuumadii xiligaasi xilka wareejinaysay ee uu hogaaminayey Maxamuud Muuse Xirsi [Cadde Musse].
Xukuumada cusub ee Cabdiraxmaan Maxamed Faroole ayaa bilowgii xooga saartay dhanka maamulka iyo dib u habeynta dowlada, iyadoo la dhisay xukuumad cusub oo u badan qurbo joog.
Madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Faroole iyo Madaxa African Oil
Dhanka kale xukuumadii Cabdiraxmaan Maxamed Faroole ayaa dib u cusbooneysiisay heshiiskii ay Puntland horey ulla gashay shirkadaha macdanta iyo Batroolka baara oo ay horey uga cabanayeen dadka deegaanka Galgala, taasi oo markale fursad u siisay Maxamed Siciid attam inuu helo taageero kale oo uu kala soo horjeesto xukuumada Puntland.
Madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Faroole oo isagu markii hore xukuumadii Cadde ku dhaliilayey baaritaankii macdanta Majiyahan ayaa markale la kulmay awooda Maxamed Siciid Attam ee kusii baaheysay deegaanka Galgala, waxayna xukuumada marka hore indhaha ka xiratay inay arrintan u wajahdo hab militari. Waxaana jiray wadahadalo hoose oo dowlada cusub la sameysay Beelaha deegaanka Sanaag Bari iyo Haylaan oo ku aadan sidii hub ka dhigis loogu sameyn lahaa ciidamada Maxamed Siciid Attam ee ku sugnaa deegaanka Galgala.
Waxayna ku guuleysatay in dowlada ay ciidamo qorto qaar kamid ah raggii ka dagaalamayey buuraha Galgala, halka xubno kale xilal loo dhiibay sida Cabdijamaal Cismaan Maxamed oo laga dhigay Wasiir kuxigeenka Amniga Puntland, si uu xukuumada gacan ugu siiyo sugida amaanka buuraha Galgala iyo waliba magaalada Bosaaso.
Maxamed Siciid Attam oo isagu ahmiyada halgankiisa ka weynaa macdan iyo danaha beelaha balse ahaa mid salka ku haya dhanka Diinta iyo in dowlad islaami ah laga dhiso Puntland ayaa isagu ka cago jiiday in hubka la dhigo, wuxuuna ku xiray dowlada Puntland in xabsiyada laga siidaayo in badan oo kamid ah dagaalyahanadii lagu qabtay dagaalkii Majiyahan oo xabsiyada lagu hayey.
2010: Maxamed Siciid Attam ayaa sii xoojiyey weerarada uu la beegsanayey ciidamada Dowlada Puntland, waxaana sare usii kacay weerarada ka dhacay gudaha magaalada Bosaaso, kuwaasi oo isugu jiray dilal qorsheysan iyo waliba qaraxyo bambaano kuwaasi oo ay dad badan ku dhinteen.
Waxaa magaalada Bosaaso lagu dilay dad ku dhaw 100 qof, ayadoo ay ku jiraan in badan saraakiil kamid ah ciidamada amniga sida sirdoonka PIS, Booliiska, mas’uuliyiinta maamulka degmada iyo gobalka, nabadoono, ganacsato iyo waxgarad kale.
Xiligaasi ayuu Madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Faroole kusoo baraarugay xaaladu meeshay mareyso, asagoo go’aano is daba joog ah soo saaray oo shacabka Puntland iyo dowlada loogu baaqayo in ay dagaal kala hortagaan maleeshiyaadka uu hogaaminayo Attam, iyadoo xiligaasi dowlada Puntland ku tilmaamtay in wadaadkaasi uu yahay Argagaxiso.
[Dhageyso: Madaxweyne Faroole oo shacabka ugu baaqay la dagaalanka kooxda Galgala]
Maxamed Siciid Attam oo isagu intii hore ka gaabsan jiray inuu kamid yahay dhaq dhaqaaqa Islaamiga ah ee Soomaaliya horeyna in badan ugu doodi jiray inuu yahay hogaamiye deegaankiisa ka difaacaya booba xukuumada Puntland ku heyso ayaa bartamihii sanadkii 2010 wareysi uu siiyey taageerayaasha Al shabaab ee kuwada sheekaysta aalada Paltalk wuxuu ku sheegay inuu asagu u dagaalamayo dhismaha maamul Islaami ah. Wuxuuna Attam markii ugu horeysay ku qiranayaa xiriirkii soo jireenka ahaa ee ka dhaxeeyey dhankooda iyo Xarakada Al Shabaab.
[Dhageyso Wareysigii Paltalk ee Maxamed Siciid Attam]
Dhanka kale Odayaasha kasoo jeeda deegaanka Galgala ayaa dowlada ugu baaqay inaysan dagaal iyo weerar ku qaadin Galgala isla markaana ayaga fursad loo siiyo in ay arrintan waan waan nabadeed ku xaliyaan. Halkan ka akhriso Baaqii kasoo baxay odayaasha Deegaanka bishii July 2010. Sidoo kale Wareysi uu siiyey Horseed Media xiligaasi Axmed Siciid Madaxweyn oo kamid ah odayaasha beesha Warsengeli oo Baaqa Nabada soo saaray ayaa ka codsaday Madaxweynaha in uu wadahadalka Nabadeynta uu fursad siiyo [Halkan ka dhageyso Wareysiga Nabadoonka:
Akhriso Baaqa beesha Warsangeli: https://horseedmedia.net/2010/07/30/baaq-ay-soo-saareen-odoyaasha-nabadda-ka-wada-galgala/
Horseed Media ayaa heshay xog ah in dowlada Puntland ay bixisay dhaqaalihii ku baxay waan waantan nabadeed oo kumanaan kun oo dollar gaarayey. Balse wadahadalan ayaa noqday kuwo lagu fashilay Maxamed Siciid Attam ayaa ku adkeystay inuu dagaal xoogleh la galayo Dowlada, isagoo sidoo kale isku balaariyey deegaanada hoos yimaada Galgala. Dowlada Puntland ayaa xiligaasi go’aansatay in ay hab militari ku xaliso arrinta Galgala.
Dagaalkii iyo Guushii Puntland ee 2010
Ciidamada Puntland oo ku sugan buuraha Galgala guushoodi kadib
Bishii Oktoober ee sanadkii 2010 ayey dowlada qaaday weerar xoogleh oo ay u adeegsatay qeybo badan oo kamid ah ciidamadeeda kala duwan waxaana duulaanka ka qeyb qaatay ciidamada Sirdoonka PIS, ciidamadii Birmadka, Daraawiishta iyo ciidamada Madaxtooyada. Duulaankan ayey ciidamada Puntland soo afjareen 19kii bishii Oktoober 2010, dagaaladii ugu xooga badnaa ee buuraha ayaa ka dhacay shan goobood oo kala ahaa: Dhagax Daabur, Madarshoon, Dhagaxdheer, Karin Xaragood iyo Diin Digle.
Taliyaha ciidanka daraawiishta Puntland Gen.Siciid Dheere oo warbaahinta kula hadalaya Galgala
20kii Oktoober 2010, Shir jaraa’iid ayuu Taliyaha ciidamada Daraawiishta Puntland Gen.Siciid Maxamed Xirsi (Siciid Dheere) ku qabtay deegaanka Diin Digle oo ahayd saldhigii ugu danbeysay oo laga saaro xoogagii uu hogaaminayey Maxamed Siciid Attam, iyadoo halkaasi lagusoo bandhigay saanadii hubka ahayd iyo gaadiidkii uu lahaa Maxamed Siciid Attam. Xiligaasi ayey gebi ahaan deegaanka buuraleyda ah la wareegeen ciidamada Puntland ayagoo sheegay inay saldhigyo ka sameysanayaan dhamaan deegaankaasi.
Halkan ka daawo Sawirada Diin Digle: https://horseedmedia.net/2010/10/20/siciid-dheere-shir-saxaafadeed/
Halkan ka dhageyso Taliyaha Siciid Dheere oo ka hadlaya dagaalka suu kusoo dhamaaday: [powerpress: url=”https://horseedmedia.net/audio/siciid_dheere.mp3″]
Koox kamid ah ciidanka Puntland oo ku dhexsugan gudaha magaalada Galgala
Guushii dagaalkii Galgala ee ciidamada Puntland ayaa waxay iridaha u furtay in ciidamada ugu baaqaan dadkii ka baro kacay magaalada Galgala loogu baaqo inay dib ugu noqdaan magaalada Galgala. Dad badan baa deegaanka isaga qaxay, iyadoo sidoo kale ay jiraan beero kamid ah beerihii ku yiilay magaalada Galgala ku yaal oo dagaalada ku gubtay. Ciidamada Puntland ayaa deegaankaasi ku sugnaa muddo labo bilood ah ayagoo halkaasi xarumo ka sameystay, waxaana halkaasi booqashooyin ku tagay Madaxweyne kuxigeenka Puntland iyo Wasiirada dowlada oo bilihii Oktoober iyo November ee 2010 ku noq noqday xarumaha ciidamada ku sugan buuraleyda.
Madaxweyne kuxigeenka Puntland Cabdisamad Cali Shire iyo koox wasiiro ah oo booqdey Galgala
Halkan ka daawo mid kamid ah booqashadii M/kuxigeenka ee deegaanka Galgala: https://horseedmedia.net/2010/11/04/madaxweyne-kuxigeenka-puntland-iyo-wasiiro-oo-booqday-galgala-iyo-madarshoon-sawiro/
[Waxaan intaan kusoo koobaynaa Qeybtii 1aad ee bilowgii iyo dhamaadkii dagaalka Galgala, waxaan qeybta labaad uga hadleynaa Dib u gurashadii Ciidamada Puntland iyo dib usoo noqoshadii Al Shabaab ee buuraha, sababihii keenay iyo go’aamadii dowlada Puntland qaadatay. Kala soco Horseed Media Qeybta 2aad ee warbixintan Taariikheysan ee xiisada deegaanka Galgala.]